Baarlamaanka | News From Somalia
Category Archives: Baarlamaanka
KHILAAF ADAG:- Faarax C/Qaadir,Ibraahim Sheekh iyo Kamaal Guutaale oo Shaqadii Fowziyo Sheekh iyo Villa Somalia la Wareegay kana soo haray wafdigii Xasan Gurguurte oo Xamar soo gaaray.
Khilaaf ayaa hareeyay dhamaan nidaamka Xasan Gurguurte oo dhan waxaaana khilaafka ugu adag soo kala dhaxgalay qaar katirsan wasiirada xukuumadda Saacid Shirdoon iyo shaqaalaha madaxtooyada gaar ahaan kuwa sida gaarka ah ula shaqeeya Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasiiradda arrimaha dibadda DF-ka Fowziyo Xaaji ayaa ka cabatay xok-heynta Xasan Gurguurte Kamaal Guutaale , Wasiirka Madaxtooyada Faarax C/qaadir iyo Ibraahim Sheekh Muxudiin oo ah adaxa protocolka.
Sadexdan ninayaa hore u ahaan jiray gacanta midig u ah Xasan Sheekh waxay si toos ah u kala wadaan howlaha DF-ka ee dibadda sida iyagoo khudbadaha madaxweynaha geeya shirarka caalamiga ah maalmo ka hor inta uusan Xasan Sheekh ka dhoofin dalka halka Fowziyo aysan wax shaqa ah ka qaban cilaaqaadka arrimaha khaarijiga marka laga reebo in DF-ka ay arrimaha dibadda ku metesho.
Fadeexada ugu daran waxay dhacday shir bishii April ee lasoo dhaafay ka dhacay wadanka Itoobiya oo laba maalin ka hor ay labadan Nin geeyeen khudbaddii Xasan Sheekh uu akhrin lahaa iyo dhammaan wixii ajandayaal ah ee DF-ka shirkaasi ka laheyd halka Fowziyo waqti dambe ay shakhsi ahaan u tagtay.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Magaalada Nairobi ay ku sugan yihiin Agaasimaha guud ee Madaxtooyada Kamaal Daahir Xasan Guutaale, Madaxa Poratakoolka Madaxtooyada Ibraahim Shiikh Muxudiin Ow-cadow, Agaasime ku-xigeenka Madaxtooytada Xuseen Iidow iyo xubno kale.
Ilo Wareedyo ku dhaw saraakiishan ka tirsan Madaxtooyada ayaa sheegay inuu muran iyo isqabqabsi hareeyey saraakiisha iyo wafdigii ka socday dowlada ee uu Hogaaminayay Madaxweyne Xasan kaasoo aan rasmi ahaan la ogeyn waxaa uu salka ku hayo.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa sidoo kale dalka UK uga soo haray Wasiirka difaaca C/xakiin Xaaji Fiqqi iyo ku-xigeenkiisa, taasoo aan la ogayn waxay tahay, balse Warar la isla isla dhexmarayo ayaa sheegaya in Safarka Madaxweynaha ee UK uu ka muuqday dulduleelo badan.
Sidoo kale lama oga ujeedada ka dambaysa in Madaxweyne Xasan oo aan la socon wafdigii caalamiga ahaa ee ka raacay Xarunta Madaxtooyada uu ku laabto Muqdisho, asagoo aysan la socon saraakiishii Madaxtooyada oo loo baahnaa in ay garab istaagaan.
Dowladaha Kenya Iyo Ethiopia oo Walaac ka Muujinaya Ammaanka Xuduudaha ay la Wadaagaan Somalia.
Madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya ninka lagu magacaabo William Ruto ayaa ka qeyb galay kulan looga arin sanayay ammaanka wadanka Kenya ee faraha kasii baxayay mudooyinkii danbe.
William Ruto ayaa sidookale shirka waxaa ku wehlinayay intii uu soconayay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee Kenya kuwaasi oo wax laga weydiinayay sida laga yeeli lahaa ammaanka faraha kasii baxaya, waxaana William Ruto uu ku adkeyay laamaha amniga qaabilsan in ay si deg deg ah ciidamo ugu daabulaan Mandhera iyo deeganada ku hareereysan ee xad beenaadka la wadaaga Somalia.
Madaxweyne ku xigeenka wadankaasi Kenya ayaa ku celceliyay in dhib weyn uu ka heysto sugida ammaanka xuduudaha isagoo sheegay in kooxaha Islaamiyiinta ah ay uga soo gudbaan dhanka Somalia, taasine ay keentay in amniga wadanka Kenya uu faraha kasii baxo.
Shirkaani oo qaab ahaan u ekaa mid niyada loogu dhisayo shacabka wadanka Kenya ee qal-qalka uu ka heysto ammaankooda, ayaa lagu soo bandhigay qorshayaal wax looga badalayo xaalada qalafsan ee uu hadda ku sugan yahay wadankaasi Kenya, waxaana leysla meel dhigay in ciidamada lageyn doono xad beenaadka Kenya ay la wadaagto Somalia, ay qasab ku noqon doonto in ay sameeyaan roondo joogta ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka wadanka.
William Ruto ayaa sheegay sidookale in ciidamada dowladda Ethiopia ay ka taageeri doonaan howl-gallada ay sameyn doonaan ciidamada jooga xuduudaha si buuyiri gacan bir ahloogu qabto kuwa qal-qalka ku haya amniga wadanka Kenya.
Ku xigeenka Madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku dheeraaday warka ku aadan adkeynta ammaanka Kenya isagoo sidoo kale sheegay in saraakiil Boliis ah oo gaaraya 200 loo dirayo magaalada Mandhera iyo deegaanada kale ee xadka ku yaalla.
Saraakiisha Hay’adaha ammaanka Kenya ka tirsan ee ka qeyb galay shirka looga hadlayay arinta la xiriirta ammaanka wadanka Kenya ayaa intiisa badan waxa ay ku lafa gureen sidii looga hortagi lahaa amni darrada ka jirta wadanka Kenya iyo sidii ay dowladaha Ethiopia iyo Kenya is kaga kaashan lahaayeen xal u helista ammaanka xuduudaha ay la wadaagaan Somalia.
Dowladda Kenya ayaa mudooyinkii danbe waxa ay walaac ka muujineysay sidii ay xal ugu heli laheyd amni darrada ka jirta gudaha wadanka Kenya, balse lama oga sida shirkaani wax uga badali doono xaalada murugsan ee hadda ka jirta wadankaasi Kenya.
Banaadir Post.Delegation from Somali capital Mogadishu consisting of 40 politicians & elders has refused entry to Kismayo airport .They were turned back by Kenya military who is guarding the airport. The delegation was the have no permission to land.
Cabdiakriin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ah wasiirka Gaashaandhiga Dowladda Federaalka ayaa ku hor kufay kuna calaacalay Saraakiil iyo Ciidamo Ingiriis ah xili uu ku booqday goob lagu macahad tababara ciidamada calooshooda ku shaqeeya oo dibadaha loo diro.
Muddo Afar bil ah wax dagaal ah may aysan qaadin dowladu maxaa yeelay hub mahaysano,ciidamada shabaabku joogto ayay usoo weeraraan Askarteena hubna mahaysano’ayuu ku calaacalay Ina Xaaji Fiqi.
Fiqi ayaa tilmaamay in Beesha Caalamka cunoqabataynta hubka ka qaaday Dowladda laakin iyagu aysan haysan dhaqaallo ay hub kusoo iibsadaan.
“Ciidan dhisan oo dagaalama waynu haysanaa laakin difaacyada kama bixi karaan maxaa yeelay mahaystaan hub marka waxay sugto uy ihiin dagaallo lagu soo qaado islamarkaana iyagu naftooda ay difaacdaan”ayuu sii raaciyay Ina Xaaji Fiqi”
Warka kasoo baxay Dowladda Federaalka gaar ahaan wasiirka gaashaandhiga ayaa ku soo aaday xili shirkii Ingiriiska loogu yaboohay in ku dhaw 300 oo milyan Doolarka Maraykanka ah.
Maleeshiyo Beeleedka oo u yaqaan ciidamoah kuwa dhaqan xun oo Mooryaan dadkana dhaca dumarkana kufsada,waxaa kale caan ku yihiin inay sii iibsadaan hubka la siiyo si ugu8 iibsadaan qaad iyo Calaq ay cabaan.
Waxaa Maleeshiyaadkan hortiis ku wareeray kuwii ka horeeyay sida Cabdulaahi Yuusuf iyo saraakiil dagaaleed oo aad u yaqaan dagaalada oo Ina Xaaji Fiqi” uusan waxba ka aqoon laakin loo keenay inow dadka sii wareersho.
Madaxweynaha dowladda Federalka ah ayaa ammaan u jeediyay dowladda Ingiriiska oo ah cadawga kowaad ee ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed.
Ka sokow khudbadda uu ka jeediyay shirka London, waxaa jira wareysiyo uu si gaar gaar ah u siiyay warbaahinta qaar oo uu ku jira Taleefashinka Al-Jazeera qeybtiisa Ingiriiska. Madaxweyne Xassan ayaa war baahinta u sheegay inaanu waligi hilmaami doonin dowladda Ingiriiska oo uu ku tilmaamay mid caawineysa ummada Soomaaliyeed.
Xassan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale khudbaddiisii shirka ku muujiyay calaacal iyo cabsi uu ka qabo mujaahidiinta isagoona sheegay in caqabad caalami ah ay heysato dowladdiisa.
Madaxweyne Xassan ayaa u muuqda mid ay gaaladu dooneyso in ay ka dhigato mididii ugu dambeysay ee lagu gawraco ummada muslimka ee Soomaaliyeed.
Tusaale waxaa kuugu filan in dowladdiisa laga saaray kumeel gaarnimada si looga saxiixdow wax walba, waxaana jirta in Xassan uu saxiixa ka soke yahay nin u caaboon in gaalada la siiyo dalkeena sida laga dheehanayay khudbaddii uu ka jeediyay shirkii kooxda xiriirka caalamiga Soomaaliya ee uu ka qeybgalay. Xassan waxa uu shirkaasi ka sheegay in badda Soomaaliya tahay 12 meyl isagoona meesha ka saaray 188 meyl oo baddeena ah si gaaladu u qaadato.
Wax kale Iska dhaafe xitaa xeerka Badda Soomaaliya ayaa qoraya in cabirka baddeenu yahay 200 oo meyl. Sida indheer garadku sheegayaan Xassan Sheekh Maxamuud waa mididii lagu kala qeybsan lahaa inta kasoo hartay Soomaali weyn oo uu horey usoo kala qeybiyay Ingiriisku.
Wakaaladda wararka ee Harar, horey ayey uga hadashay qorshaha reer galbeedka iyadoona tilmaantay in xilligan lasoo gaaray waqtigii ay qorsheysteen gurashada kheyraadka dalkeena.
Hoos ka aqriso qorshaha reer galbeedka ee uu Xassan nala doonayo.
Cusuurtii dhexe ama 1800 wixii loo soo gaaray Yurubta waxay xoogga saareen iney baaritaan dheer ku sameeyaan adduunka, kheyraadka ku jira, dadka ku nool iyo diimaha ay kala aaminsanyihiin si ay u gaaraan hadaf gumeysi oo dano badan xambaarsan.
Sahmiyaal fara badan ayey direen oo caalamka meel walba maray, markaas kadibna waxay ogaadeen in ay u suurta gal tahay markey Khilaafadii Cuthmaaniyiinta tabar dareyso in caalamka islaamka ay soo gali karaan islamarkaana qabsan karaan.
Sidaa bey wixii ka dambeeyay 1882kii kusoo galeen Soomaaliya iyagoo burburiyay Khilaafadii meesha ka jirtay, kadib waxay u dhaqaaqeen iney si khaas ah u sahmiyaan kheyraadka dalka ku jira oo uu raadadkiisu muuqdo illaa iyo maanta. Meel walba waxay mariyeen calaamado iyo wadooyin kuwaasoo loo yaqaano wadooyinka Ameerikaanka, wadooyinka Ingiriiska, wadooyinka Talyaaniga, wadooyinka Bortoqiiska iyo kuwa kale.
Sannadkee Ayey Go’aansadeen In Ay La Baxaan Kheyraadka Dalka?
Reer galbeedku waxay qorsheysteen in ay kheyraadkaasi la baxaan marka la gaaro 2010 inta ka sokeysana ay sii dajiyaan istaraatiijiyaddii ay ku fulin lahaayeen xoog iyo xeeladba.
1945 markuu gabagabada ahaa waxa loogu yeeray dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ra’iisul wasaarihii ingiriiska Winiston Churchill iyo ururkii Sahyuuniyadda ee lagu aas aasay dalka Austoria waxay heshiis ku galeen wixii ka dambeeya 2010ka in Yahuuda dagto dalalka Geeska Afrika laga soo billaabo harooyinka Victoria illaa iyo Badda cas.
Reer galbeedku waxay Soomaaliya u ahayd keyd ay kor ka ilaashadaan oo ay u joogaan maamulo ay iyagu sameeyeen kuna dhaqma dastuur gaalnimo ah.
Markii ay meesha ka bexeen dowladihii Aadan Cadde iyo Cabdirashiid islamarkaana hana qaaday xukuumaddii milatariga ahayd ayaa waxaa reer galbeedka soo wajahay cabsi ku aadan inaaney kheyraadka la bixi karin haddii ay sii jirto dowladdii Siyaad Barre oo ahayd mid wadaniyad aaminsan inkastoo ay diinta ka fogeyd.
Cabsida reer galbeedka ayaa waxaa sii xoojiyay markey arkeen in dadka Soomaalidu yihiin shacab isku mid ah, isku diin ah, isku madhab shaaficiyo ah, isku luqad ah islamarkaana ehel wadaaga.
Intaas kadib waxaa xooga la saaray in dowladaasi la dumiyo shacabkana lakala firdhiyo sidii horeyba loogu sameeyay dalal badan oo caalamka islaamka ka tirsan sida:- Indoniisiya, Al-jeeriya iyo Nayjeeriya si hadhow shucuub akhlaaq iyo diimo kala wato oo gaalo ah dalka loogu soo celiyo!. Arintaasi waxay ka dhacday Indonisiya, aakhirkii u dambeeyayna waxaa laga gooyay gobol dhan oo East Timor la yiraahdo.
Sidaa awadeed dowladdii Shuuciga ahayd ee uu hogaaminayay kaligi taliyihii Siyaad Barre waa la riday, kadibna waxaa shir lagu qabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaasoo safiirkii Mareykanka u fadhiyay uu ka jeediyay khudbad isagoo yiri “waxaan aad ugu faraxsanahay maanta darbigii Soomaaliya ku hareersanaa waa uu dumay waxaana jirta fursad muhim ah oo u bannaan dalalka daneeya arimaha Soomaaliya, waxaana ugu baaqayaa in arintaasi loo dhaqaaqo lagana faa’iideysto”.
Tallaabooyinka La Qaaday Burburka Kadib.
Si dagdag ah ayaa hawshi loo billaabay, xeryo qaxooti ayaa dadkii loo sameeyay, dagaal sokeeye ayaa wadanki laga oogay, qabqablayaal iyo jabhado ayaa la abuuray intaana waxaa dheer in ummadii in ka badan shan milyan lagu shubay Yurub iyo Ameerika kuwaasoo ay qaadayeen Kaniisadaha, ururada diimaha, baadariyaasha iyo hey’adaha.
In badan oo kamid ah dadkaasi waxaa loo badalay gaalo iyo kuwa aananba aqoon waxa ay yihiin kadibna dib ayaa loo soo celiyay iyagoo matalaya danaha Yurub iyo Mareykan.
Waxaa taa barbar socda hoos u dhaca dhaqaalaha reer galbeedka oo soo bilowday markii uu dagaalkii qaboobaa dhamaaday kaasoo wixii ka dambeeyay 2000 u xuub siibtay burbur saameyn weyn keenay, kadibna waxaa soo cusboonaaday dalab ah in la boobo dhaqaalaha caalamka islaamka ku jira sida:- Ciraaq, Afganistaan, Somaaliya, Nayjeeriya, Maali iyo wadamo kale si loogu kabo ra’sumaaliyada caalamiga ah ee uu burburka dhaqaale ku socdo.
Duulaanka hadda ku socda Soomaaliyana waxa uu qeyb ka yahay arimahaasi iyadoo xoogga la saarayo in lala dagaalamo inti la awoodi karo mujaahidiinta oo uu Allaah kasoo daahiriyay meel aaney raar galbeedku kusii tahsan istaraatiijiyad ahaan.
Soomaaliya waxaa hadda duulaan ku jooga lix wadan oo calooshood u shaqeystayaal ah oo ay soo kireysteen Mareykanka iyo Yurub kuwaasoo kala ah: Kenya, Itoobiya, Uganda, Burundi, Siiralyoon iyo Jabuuti.
Maxaa Ahmiyada Loo Siinayaa Soomaaliya oo Quwadahan Badan Loogu Soo Diray?
Dalka Soomaaliya waxaa ku jira kheyraad noocyo kala duwan leh oo aad u badan waayo marka dhaqaalaha caalamka laga hadlayo waxa ugu horeeya ee lasoo qaato waa shidaalka, Somaliyana waxay hodan ku tahay shidaalka sida ay shaaciyeen reer galbeedka qudhooda.
Shrkadda Conoco ayaa warbixin ay soo saartay sannadkii 2010kii ku sheegtay in dalka Soomaaliya uu kaalinta labaad uga jiro sideeda dal ee Afrika ugu shidaalka badan.
Shirkado kale oo ay kamid yihiin Afrika Oil iyo Ranger Resource ayaa sheegay in dalka Soomaaliya yahay wadanka labaad ee ugu nadiifsan shidaalka qaaradda Afrika.
Wax qarsoon ma ahan in uu dalkeenu yahay kan labaad ee Afrika marka Sudan laga yimaado. Soomaaliya wuxuu Allaah ugu deeqay macdan, dahab, dheyman, gaas dabiici ah, kalluun qareedka aduunka ugu qaalisan, beero 3 milyan oo hektar ka badan iyo xoolo nool oo kala gadisan.
Geela oo kale markaan tusaale usoo qaadano waxaa la yiraahdaa geela adduunka 70 % wuxuu joogaa Soomaaliya. Kheyraadka intaa la eg waxaa heysta dad yar oo muslimiin ah ehelna isu wada ah, waana midda keentay in lagu soo duulo si gacantooda looga baxsho umad kalana loogu beero dalkooda.
Maxaa Caddeyn U Ah Arintaas?
Daliil waxaa kuugu filan dastuurka cusub ee ay gaaladu dajisay, markaan kasoo qaadano jinsiyada oo kale waxaa ku qoran qofka 5 sano hadduu Soomaaliya joogo waa muwaadin, waxaa ku qoran ilmo kasta cidduu doono ha u dhasho haddii dhul Soomaaliyeed laga helo waa muwaadin.
Waxaa kaloo ku qoran gabar kasta oo Soomaaliyeed meeshey doonto haku dhasho, cidey doonto ha u dhasaho, cunugey dhasho waa Soomaali.
Waxa dadkaas oo dhan loo Soomaaliyeynayo waa in dad lagu yeesho dalka si ay u fududaato in la burburiyo jiritaanka ummadeed kadibna loo qaato kheyraadka wadanka.
Si arintaasi loo fududeeyo waxaa kale oo dastuurka ku jira qodob lagu kala fogeynayo ummada Soomaaliyeed kaasoo oranaya “Soomaalidu waa laba jinsi oo kala ah Carab iyo Afrikaan, waxay ku hadlaan 3 luqadood oo kala ah: Maxaa tiri, May tiri, iyo Carabi”. Sirta ku jirta meehsaasi waa in Afrikaanta soo duushay is xijiyaan dadka qaar oo ay yiraahdaan annaga ayaad nala dhalateen.
Caqabad Adag oo Hor Taagan Boobka Reer Galbeedka
Xilligan aynu joogno aadanuhu wuu horu maray maskax iyo jir ahaan intaba, waana midda keentay in reer galbeedku si dhameystiran u gumeysan waayo ummad badan oo uu adoonsan jiray sida:- Soomaaliya.
Dalka Soomaaliya waxaa ka hana qaaday Mujaahidiinta Al-Shabaab oo xiriir la leh jihaadiyiinta caalamka oo uu hadafkoodu yahay in ummada laga yureeyo cadawga laguna dhaqo diinta Islaamka oo barax tiran.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay awood u yeelatay in ay si cad u hor istaagto ujeedooyinka reer galbeedka ee ku dhisan gaalnimada iyo hagardaamada.
Mujaahidiinta waxay sameeyeen wax qabad taariikhi ah oo uu xitaa ku faani doono Soomaaliga gaalada la socda, waxay jilibka u aasteen oo ay iska caabinayaan lix wadan oo dhulka joogta iyo reer galbeedka oo hawada ka taageeraya dhaqaale iyo hubna siinaya.
Sidoo kale Mujaahidiintu waxay dadka ku baraarujiyeen dhagarta gaalada iyagoo baray in la iska dhicin karo taasoo keentay in dadku noqdaan kuwa jihaadka ku biiray, kuwa taageera iyo kuwa dhabbaha kusoo jira.
Qore-Maslax Ilka Case.